Madagasikara: Nahoana Rajoelina No Tsy Nilatsaka Hofidiana Ho Filohampirenena? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Janoary 2013 0:41 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, Italiano, 繁體中文, 简体中文, Français
Andry Rajoelina ao amin'ny wikipédia. License Creative Commons 3.0
Taorian'ny fanambaran'ny filohan'ny tetezamita Rajoelina tsy ho kandidà izay nanaraka ny an'ny filoha teo aloha Ravalomanana tamin'ny desambra 2012, hanana filoha vaovao izany ny malagasy amin'ity taona 2013 ity, ka hoe hotontosaina araka ny fotoana efa niomanana ny datim-pifidianana. Maro ny mpanara-baovao no tsy dia matoky loatra amin'ny fanatanterahana ny fifidianana raha jerena avy amin'ny fanambaran-dRajoelina amin'ny fomba tiany hanatontosana ny fifidianana.
Efa-taona nisian'ny krizy sy ny fivadibadihan-delan'ny mpitarika politika, dia manontany tena ny mpanara-baovao raha tsy atahorana izao fivadihan-kevitra izao.
Anisan'ny be ahiahy [en] i Andry :
Mahazo matoky ve isika fa hipetraka tsara sy hijery fotsiny izy ? Na dia efa nanao fanambarana ofisialy tamin'ny firenena teo imason'ny Malagasy iray manontolo aza izy, inona no antoka fa hitana ny teniny izy ? Tsy vao indray mandeha no efa nitsipaka izay nosoniaviny izy.
Maurice Beranto, iray amin'ny kandidà ho filoham-pirenena, manontany toy izany ihany koa ao amin'ny bilaoginy :
Maro amintsika, izaho no voalohany, no mbola manontany hoe nahoana no mbola feno fisalasalana ihany na dia efa miatrika zavatra miharihary aza. Ahoana tokoa moa no ahafaha-mieritreritra fa afa-mirotsaka hofidiana amina fifidianana izay hamaranana ny tetezamita izay tantaniny ny filohan'ny tetezamita? [..] Faharoa manaraka izany, amin'ny fiheverana fa ny fifidianana depiote no tokony hotontosaina alohan'ny fifidianana filoham-pirenena, dia asehon-dRajoelina fa tsy tamim-tsitrapo no nanaovana ny fanambarana tsy hirotsaka ho filoham-pirenena. Raha tokony hampitony tanteraka ny lalao izy dia mbola hanampy trotraka ihany..
Manontany ihany koa Rabelazao raha toia ka tsy misy tanjona hafa ao ambadiky ny fanatanterahana ny fifidianana solombavambahoaka mialoha ny fifidianana filoham-pirenena nefa efa notapahin'ny Vaomieram-Pirenena Mahaleo Tena Misahana Ny Fifidianana Mandritra ny Tetezamita CENI-T ny datim-pifidianana. Toy izao no nosoratany tao amin'ny twitter [mg]:
Lasa lavitra kokoa i Jack amin'ny famakafakana ny antony nahatonga an-dRajoelina mikiry ny hanatontosana ny solombavambahoaka mialoha ny filoham-pirenena:
Raha mahavita mandefa mialoha ny fifidianana solombavambahoaka izy, nefa mbola filohan'ny tetezamita, dia hitovy amin'ny referandaoma ny ho fizotrany. Ho maro an'isa ny TGV ka ao anatin'ny fotoam-pivoriana maningana manokana no hanovany ao anatin'ny valo andro ny lalampanorenana ho manamafy amin'ny ampahany ny fahefan'ny filoham-pirenena. Hotendrena ho Praiminisitra izy.
Namaly izan petra-kevitra izany Rajoelina nandritra ny tafatafa nifanaovana tamin'ny RFI, izay nampahatsiahy ny tranga toy izany tamin'ny V. Putin tany Rosia. Indro ny sombin'izany tafatafa nifanaovana tamin'i Christophe Boisbouvier izany:
CB: Mametraka ny tenanao ho Olom-Panjakana ianao. Misy olona izay nakanao tahaka ve nialoha ny nanaovanao ny safidinao ?
AR: Misy olona roa tokoa. Olona iray niaritra ny mafy tokoa saingy nandresy tamin'ny adiny : Nelson Mandela. Ary raha eo amin'ny lafiny Eoropeana indray, inona ny antony tsy ametrahana ahy ho de Gaulle malagasy?
Fa inona tokoa no noraisinao avy amin'i de Gaulle ?
Naka fanapahan-kevitra tamin'ny fotoana nilàna izany. Fa hahatsiaro ny vahoaka. Ka ny vahoaka ihany no hiantso izay tokony hitondra ny firenena, amin'ny fotoana ilàna izany.
[..] Mieritreritra toy ny tranga tamin'i Putin ve ianao ? Lany ny kandidànao, dia lasa Praiminisitra ianao ka hiverina amin'ny 2018 ?
Tsy mbola misy tetipanorona napetraka amin'izao fotoana izao.
Izany hoe tsy eriteretinao ny tahaka ny an'i Putin ?
Mbola ho hitantsika. hahalala bebe kokoa ianao ao anatin'ny herinandro vitsivitsy.
Patrick ao amin'ny Madagascar Tribune mamoaka amin'ny antsipirihany ny fisalasalana mialoha io fanambarana io ary manazava fa ny raharaham-pitsarana mety hiandry an-dRajoelina no nanosika ity farany hihemotra tsy ho kandidà:
Ny dingana sarotra indrindra efa azo dia ny fijanonan'i Marc Ravalomanana, satria izy no nihenahena kokoa noho ny mpifanandrina aminy eo amin'ity teboka ity. Efa lasa tsy misy dikany intsony izay fikirizana rehetra atao : raha toa ka mbola tsy naharesy lahatra loatra ny sazy ara-bola natao tamin'i Madagasikara, dia ny faneken'ny Fitsarana Frantsay fitoriana napetraka any Frantsa avy amin'olona iray mizaka ny zom-pirenena Malagasy sy Frantsay ho azo raisina ohatra no hametraka an'i Andry Rajoelina sy ny namany ho sahiran-kevitra.
Na ho inona na ho inona fivadihan-draharaha amin'ity taona 2013 izay ho feno tsy ampoizina ity, mbola ho be ny asa miandry kandidà maro sisa ambiny. Eo ankilan'ny fepetra nirìn-dRajoelina amin'ny fanatontosana ny fifidianana, dia mbola maro ny sakana mihatra amin'ny fanantanterahana ny fifidianana, tahaka ny vola ikarakaràna ny fanomanana. Nomarihan'ny tatitra iray fa “13 tapitrisa dollars ny vola mbola tadiavina hikarakarana ny fifidianana”. Nefa nanampy ny CENI-T fa :
Nanome vola 3 miliara ariary fanampiny ho an'ny CENI-T ny minisiteran'ny Vola sy ny Tetibola. Ho tafiditra ao anatin'ny fampandehanan-draharahan'ny birao mahaleo tena io vola io. Ny Fanjakana no mitoetra ho loharanombola voalohany amin'ny raharaha fanatontosana ny fifidianana.
Mbola henjana ny toe-draharaha politika eto Madagasikara. Mahataitra ny tatitra farany nataon'ny Banky Mondialy momba ny fahantrana eto Madagasikara :
Araka ny tatitra, hahatratra ny 84%n'ny mponina eto Madagasikara ny fahantrana amin'ny 2013. Tamin'ny 2010 dia ny 77%n'ny 20 tapitrisa no miavo-tena sahirana amin'ny vola raisina 0,78 euro isan'andro [..] [Mirehitra ny jiro menan'ny] tsy fisian'asa, ny sondro-bidim-piainana, fihenan'ny fahafaha-mividin'ny isan-tokantrano.
5 andro izayBenin
6 andro izayKenyà
Tsy mahatoky izany ny avy aty amin’ny faritra satria efa zatra mivadidela izy!
18 Janoary 2013, 16:09
tsy hoe efa mivadi-dela izy ffa efa faminaniany pasteur mailhol t@ taona 2002 io fanambaran’ny filoha teteza mita iny.
29 Janoary 2013, 16:27
Soratra miverina: Fanemorana Sy Saritaka Politika Mandravarava Raha Mihamanatona ny Fifidianana Eto Madagasikara · Global Voices teny Malagasy
[…] Madagasikara: Nahoana Rajoelina No Tsy Nilatsaka Hofidiana Ho Filohampirenena? […]
12 Jona 2013, 02:08
Hiresaka koa -> diego